Nagarik News - ‘बादलुको घुम्टो'ले कोउलुन पार्क छोपिँदा
‘बादलुको घुम्टो'ले कोउलुन पार्क छोपिँदा
31 Oct 2014 | 08:31am
शुक्रबार १४ कार्तिक, २०७१
हङकङ-कोउलुन पार्क, जहाँ यान्त्रिक दैनिकी सुरु गर्नुअघि हरेक बिहान मर्निङ वाक गर्न आइपुग्छन् हङकङेलीहरु। त्यही पार्कभित्रको एउटा गोरेटोमा फुत्त देखा परे उनी। पार्कमा छापिएका टायलहरुमा बरु गगनचुम्बी घरहरुका छायाँ देखिन्थे, बादलहरुका छायाँको चाहिँ नामोनिशान थिएन। क्याप, टिसर्ट, हाफ प्यान्ट र जुत्ता सबै सेतै पहिरिएर आइपुगेका उनी अर्थात् दिनेश सुब्बासँग भेट हुँदा जोकोहीलाई बादलको सम्झना आइहाल्छ। कोउलुन पार्कको भेट अपवाद हुने कुरै थिएन।
सबैले सम्झे दिनेशको संगीत, बुद्धवीर लामाको शब्द र यम बरालको स्वर मिसिएको त्यही सदाबहार गीत, ‘बादलुको घुम्टोले इलाम बजार छेकिँदा...।'
अघिल्लो दिन इलेमेन्ट्स प्लाजाको स्टारबक्स कफिमा जम्काभेट हुँदा दिनेशले भोलिपल्ट पार्कमै भेट्ने वाचा गरेका थिए। उनले वाचा बिर्सने कुरै थिएन। पार्क र त्यसवरपरको हिँडाइमा ‘गाइड'को भूमिका निर्वाह गर्दै उनले या मा तेईस्थित भवनको छैटौं तल्लामा रहेको आफ्नो फ्ल्याटसम्म डोर्यााए।
साँघुरो हङकङमा अलि खुकुलो लाग्ने आफ्नो फ्ल्याटमा उनले एउटा चिटिक्कको म्युजिक रुम बनाएका छन्, जहाँ गीत रेकर्डिङको समेत सुविधा छ। महिनाको १० देखि १५ वटासम्म गीत रेकर्ड गरिदिन्छन् उनी। नेपालीमात्र होइन भारतीय र पाकिस्तानी समेत।
‘बादलुको घुम्टो' एउटा यस्तो गीत थियो, जसले गीतकार, गायक र संगीतकार तीनै जनालाई ‘हिट' बनाइदियो। तर, यो गीत हिट हुनुअघि दिनेश सुब्बा गायकका रुपमा अर्कै गीतबाट चर्चामा आइसकेका थिए। क्षेत्रप्रताप अधिकारीको शब्द र मानसिंह थुलुङको संगीत रहेको ‘तिम्रो हाम्रो मनको दुरी' २०४३ सालतिर धेरैको मुखमा झुन्डिएको थियो। दिनेशले यो युगल गीत उषाकिरण अधिकारीसँग गाएका थिए।
गायनमा दिनेशलाई चिनाउने अर्को गीत थियो, ‘थाहा नपाई माया मेरो'। पवित्र सुब्बासँग गाएको यस गीतमा बुद्धवीरको शब्द र दिनेशकै संगीत छ। अरुण थापाको ‘तिमी हेर्छौ भने' र रामकृष्ण ढकालको ‘हाम्रो सुन्दर संसार' जस्ता गीतले पनि दिनेशको संगीतमा उचाइ थप्ने काम गरे।
नेपालको गीतसंगीत माहौलमा रमिरहेका दिनेशले हङकङलाई कर्मभूमि बनाएको १८ वर्ष बितिसक्यो। यो अवधि कति छिटो बित्यो उनलाई हेक्कै छैन। सायद हङकङको द्रूत जीवनशैलीले यस्तो महसुस गराएको हो।
२०५३ सालसम्म उनी तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सहायक संगीत निर्देशकका रुपमा कार्यरत थिए। संगीतकार अम्बर गुरुङको मातहतमा उनको जागीर थियो। आफूले रोजेको क्षेत्र भए पनि जागीर र नेपाल दुवै छाड्न उनी बाध्य भए।
दार्जिलिङमा जन्मेहुर्केका दिनेशका बुबा र ससुरा ब्रिटिस आर्मी थिए। गोर्खालीका परिवारलाई आइडी उपलब्ध गराउने स्किमले उनी हङकङ तानिए। सुरुमा उनलाई नेपाल छाड्नु परेकोमा निकै पीडा भयो। किनभने संगीत र कलाको एउटा माहौल उनले गुमाउनुपर्योड।
तर, अचेल उनको बुझाइ बदलिएको छ। ‘त्यतिबेला नेपाल छाडेर ठिकै गरिएछ जस्तो लागेको छ,' उनी भन्छन्, ‘उता बसेको भए मेरो पेन्सन पाक्थ्यो होला, यता बसेर हङकङका नेपाली नानीहरुलाई संगीतमा डोर्या उने र हुर्काउने अवसर पाएको छु।'
हङकङका तीनवटा सरकारी स्कुलमा संगीत पढाइरहेका दिनेशको रचना संकलित ‘आमाकी नानी' एल्बमलाई हङकङ नेपाली पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। आफ्नो फ्ल्याटमा समेत संगीत कक्षा चलाउँछन् दिनेश। लगभग ३० जना विद्यार्थी नियमित धाउँछन्।
‘नेपालबाट टाढिए पनि संगीतसँग झन् नजिक भएको छु म, मलाई त्यही भएर कुनै दुखेसो छैन,' उनी थप्छन्, ‘हङकङका नेपालीहरुलाई म पूर्वेली र पाश्चात्य दुवै थरी संगीत सिकाउँछु।'
हङकङका प्रायः स्कुलहरुमा संगीतलाई अनिवार्य विषय बनाइएको छ। यसलाई सकारात्मक मान्ने दिनेश नेपालको शिक्षा प्रणालीले संगीत र कलाप्रति गरेको बेवास्तादेखि निराश छन्। ‘संगीत पढाइयो भने विद्यार्थीले संगीतमात्र होइन मानव संस्कृति, जीवन र अरु कला बुझ्ने अवसर पाउँछ,' उनी सुझाउँछन्, ‘उचित र यथेष्ट पाठ्यक्रमको विकास गरेर नेपालका स्कुलमा संगीतलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ।'
बेलाबेला फाट्टफुट्ट गाइरहने दिनेशले भर्खरै आफ्नो एकल गायन रहेको पहिलो एल्बम ‘नितान्त' श्रोतामाझ ल्याएका छन्। सुरेन लिम्बु, विष्णु चाम्लिङ, विक्रम सुब्बा, टंक सम्बाहाम्फे, विष्णुनन्द चाम्लिङ र बुद्धवीर लामाका रचना समेटिएको ‘नितान्त'लाई हङकङमा विमोचन गरिएको थियो। यसअघि उनको संगीत रहेको एकल एल्बम आधा दर्जनजति निस्किसकेको छ।
हङकङमै बसोबास गर्ने गायक ज्ञान लिम्बुको एल्बम र अरु केही गीतको कम्पोजमा व्यस्त दिनेश मुड होइन योजनाअनुसार चल्छन्। हङकङका नेपालीहरुको एउटा क्वाइर ग्रुप तयार पारेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने एउटा खर्चालु सोच उनीसँग छ। उनलाई थाहा छैन, यो साकार हुन कति समय लाग्छ?
उनको छोरा निशाद हङकङका डिजे हुन्। ‘इनरकोर' भन्ने एउटा ब्यान्ड समेत छ निशादको। छोराले आफ्नो बिँडो थाम्छ कि भन्ने आशा दिनेशमा पलाएको छ। ‘अब बाँकी जीवन कता बिताउनुहुन्छ?' प्रश्न सुनेर एकछिन घोत्लिए उनी, ‘नातिनातिनीको निकै माया लाग्छ रे, त्यसैले हङकङ छोड्न सकिन्न होला।'
« दायरा बढाउँदै रेमन्ती हङकङमा भेटिए अरुण थापाका संगीतकार »